2 “Zvino takatendeuka, tikatama kuti tiende kurenje nenzira yokuGungwa Dzvuku, sokutaura kwakanga kwaita Jehovha kwandiri;+ uye takaita mazuva mazhinji tichitenderera Gomo reSeiri. 2 Jehovha akazoti kwandiri, 3 ‘Nguva yamatenderera gomo iri yakwana.+ Tendeukai muende kuchamhembe. 4 Rayira vanhu, uchiti: “Muri kupfuura nepamuganhu wehama dzenyu,+ vanakomana vaIsau,+ vari kugara muSeiri;+ vachakutyai,+ uye munofanira kuchenjerera kwazvo. 5 Musakakavadzana navo, nokuti handizokupii nyika yavo kunyange nzvimbo yakaita sokufara kwakaita pasi petsoka; nokuti ndakapa Isau Gomo reSeiri kuti rive rake.+ 6 Mudye zvokudya zvamungatenga kwavari nemari; uyewo munwe mvura yamungatenga kwavari nemari.+ 7 Nokuti Jehovha Mwari wenyu akakukomborerai pamabasa ose emaoko enyu.+ Anonyatsoziva kufamba kwenyu nomurenje rino guru. Jehovha Mwari wenyu ave anemi kwemakore makumi mana+ aya. Hapana chamakashayiwa.”’+ 8 Naizvozvo takabva kuhama dzedu, ivo vanakomana vaIsau,+ vanogara muSeiri, kunzira yokuArabha,+ kuErati nokuEziyoni-gebheri.+ “Takazotendeuka, tikapfuurira nenzira yokurenje reMoabhi.+ 9 Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Musanetsa vaMoabhi kana kurwa navo, nokuti handizokupii nyika yavo kuti ive yenyu, nokuti ndakapa Ari+ kuvanakomana vaRoti+ kuti rive ravo. 10 (VaEmimu+ vaigara mariri munguva yekare, vaiva vanhu vahombe, vazhinji uye varefu sevaAnaki.+ 11 VaRefaimu+ vaionekwawo sevaAnaki,+ uye vaMoabhi vaivashevedza kuti vaEmimu. 12 VaHori+ vaigara muSeiri munguva yekare, uye vanakomana vaIsau+ vakavadzinga, vakavatsakatisa pamberi pavo, vakagara munzvimbo yavo,+ sezvinofanira kuita vaIsraeri kunyika yavo, yavachapiwa naJehovha.) 13 Panguva ino simukai muyambuke mupata une rukova weZeredhi.’ Naizvozvo takayambuka mupata une rukova weZeredhi.+ 14 Mazuva atakafamba kubva kuKadheshi-bhaneya kusvikira tayambuka mupata une rukova weZeredhi aiva makore makumi matatu nemasere, kusvikira chizvarwa chose chevarume vehondo chapera pakati pomusasa, sezvavakanga vapikirwa naJehovha.+ 15 Ruoko+ rwaJehovha rwaivawo pavari kuti ruvanetse uye ruvabvise pakati pomusasa, kusvikira vapera.+ 16 “Zvino varume vose vehondo vachangopera kufa pakati pevanhu,+ 17 Jehovha akataurazve neni, achiti, 18 ‘Nhasi muri kupfuura nomunharaunda yeMoabhi, kureva Ari,+ 19 musvike pedyo nepakatarisana nevanakomana vaAmoni. Musavanetsa kana kukakavadzana navo, nokuti handizokupii chero nyika ipi zvayo yevanakomana vaAmoni kuti ive yenyu, nokuti ndakaipa vanakomana vaRoti kuti ive yavo.+ 20 Iyo yaimbonzi inyika yevaRefaimu.+ (VaRefaimu vaigara mairi munguva yekare, uye vaAmoni vaivati vaZamzumimu. 21 Vaiva vanhu vahombe, vazhinji uye varefu sezvakaita vaAnaki;+ asi Jehovha akavatsakatisa+ pamberi pavo, kuti vavadzinge uye vagare munzvimbo yavo; 22 sezvaakaitira vanakomana vaIsau, vari kugara muSeiri,+ paakatsakatisa vaHori+ pamberi pavo, kuti vavadzinge uye vagare munzvimbo yavo kusvikira nhasi. 23 Asi vaAvhimu,+ vaigara mumisha yaisvika kuGaza,+ vakatsakatiswa nevaKaftorimu,+ vaya vaibva kuKaftori,+ kuti ivo vagare munzvimbo yavo.) 24 “‘Simukai, tamai pano muyambuke mupata une rukova weAnoni.+ Onai, ndaisa Sihoni+ mambo weHeshbhoni, muAmori, mumaoko enyu. Naizvozvo tangai kutora nyika yake kuti ive yenyu, uye irwai naye. 25 Nhasi ndichatanga kuita kuti marudzi ari pasi pematenga ose akuvhundukei uye akutyei, achanzwa mashoko pamusoro penyu; uye achadedera ova nemarwadzo akaita seaya okusununguka nokuda kwenyu.’+ 26 “Ndakabva ndatuma nhume kubva kurenje reKedhemoti+ kuti dziende kuna Sihoni+ mambo weHeshbhoni nemashoko orugare,+ ndichiti, 27 ‘Ndibvumire kupfuura nomunyika yako. Ndichafamba nomumugwagwa chete. Handizotsaukiri kurudyi kana kuruboshwe.+ 28 Ndichadya zvokudya zvauchanditengesera nemari; uye ndichanwa mvura yauchandipa ndichiripa mari. Ingondibvumira kupfuura ndichifamba netsoka dzangu,+ 29 sezvandakangoitirwa nevanakomana vaIsau vanogara muSeiri+ nevaMoabhi+ vanogara muAri, kusvikira ndayambuka Jodhani ndichipinda munyika yatichapiwa naJehovha Mwari wedu.’+ 30 Asi Sihoni mambo weHeshbhoni haana kutibvumira kupfuura nemaaiva, nokuti Jehovha Mwari wenyu akanga amurega achisindimara+ uye arega mwoyo wake uchioma, kuti amuise muruoko rwenyu sezvazvakaita nhasi.+ 31 “Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Ona, ndatanga kuisa Sihoni nenyika yake muruoko rwako. Tanga kutora nyika yake kuti ive yako.’+ 32 Sihoni paakabuda, iye nevanhu vake vose, kuzorwa nesu kuJahazi,+ 33 Jehovha Mwari wedu akabva amuisa mumaoko edu,+ zvokuti takamukunda+ iye nevanakomana vake nevanhu vake vose. 34 Panguva iyoyo chaiyo takatora maguta ake ose, tikaparadza chose maguta ose,+ varume nevakadzi nevana vaduku. Hatina kusiya kana mumwe chete akapona. 35 Takangopamba zvipfuwo chete, pamwe chete nezvatakapamba mumaguta atakanga tatora.+ 36 Kubva kuAroeri,+ riri pamahombekombe omupata une rukova weAnoni, neguta riri mumupata une rukova, kusvikira kuGiriyedhi, pakanga pasina taundi rakanga rakanyanya kukwirira nokuda kwedu.+ Jehovha Mwari wedu akaaisa ose mumaoko edu. 37 Asi hamuna kuenda pedyo nenyika yevanakomana vaAmoni,+ mahombekombe ose omupata une rukova weJabhoki,+ kana maguta enharaunda ine makomo, kana chinhu chipi zvacho chakanga charayirwa naJehovha Mwari wedu.